Halyeygii Reer Argentina Ee Diego Maradona Oo Cusbitaal La Dhigay Kaddib Dhiig Gudaha Kaga Furmay | Gaaroodi News
Halyeygii Reer Argentina Ee Diego Maradona Oo Cusbitaal La Dhigay Kaddib Dhiig Gudaha Kaga Furmay
Halyeygii reer Argentina ee Diego Maradona ayaa xaaladdiisa caafimaad kasoo raynaysaa, isla markaana laga saaray cusbitaal la dhigay kaddib markii uu dhiig kaga furmay caloosha.
Maradona oo ay da’diisu tahay 58 jir ayaa dhakhaatiirta waddankiisa Argentina ay ka daweeyeen dhibaato dhinaca caloosha ah, sida ay xaqiijisay inanta uu dhalayy ee Dalma, waxaana ugu dambayn loo ogolaaday inuu ku laabto gurigiisa.
Diego Maradona oo sannadihii ugu dambeeyey dhawr jeer cusbitaalka loo dhigay xanuuno haleelay, markii ugu dambaysayna ay ahaydy xilligii uu socday Koobka Adduunka oo si degdeg ah loogula cararay cusbitaal ku yaalla Ruushka kaddib ciyaartii Argentina ay kaga adkaatay Nigeria.
“Dadka sida dhabta ah uga werwersan xaaladda aabbay, waxa aan u sheegayaa inuu fiican yahay” sidaas waxa tidhi Dalma oo uu dhalay Maradona, waxaanay sii raacisay: “Si degdeg ah ayuu guriga ugu laaban doonaa.”
Diego Maradona ayaa waxa uu waqtigan tababare u yahay koox heerka labaad ah oo ka dhisan waddanka Mexico oo lagu magacaabo Dorados de Sinaloa, waxaana uu xanuunkan cusub haleelay isaga oo ku sugan waddankiisa oo aan shaqada ku jirin.